Akụkọ - Gbanwee ike dị n'ime ma setịpụ ụgbọ mmiri - Shandong Gaoqiang nwere ihe ịga nke ọma na nzukọ nzukọ ọzụzụ
SNF na-ebelata mmiri gị n'ụlọnga
SNF (Naphthalene based) mmiri na-ebelata ihe ndị na-eme ka ndị na-ebelata mmiri na-agakarị na β-Naphthalene Sulphonate Formaldehyde Condensate (aha dị mkpirikpi: SNF, PNS, NSF, wdg…). Ọ bụ nnukwu ihe na-ebelata mmiri na China ugbu a (≥ 70%). Ejiri oke mbenata mmiri (15% - 25%) mee ya, enweghị ọnya ikuku, ntakịrị mmetụta na ịtọ ntọala oge, ezigbo mmegharị na simenti, iji ihe ndị ọzọ mejupụtara yana ọnụahịa dị ala. A na-ejikarị SNF akwadebe nnukwu mmiri, ike dị elu na nnukwu arụmọrụ. Ọnwụ nke ihe nfe na mgbakwunye nke SNF bụ ngwa ngwa. Na mgbakwunye, mmeghari nke SNF na ụfọdụ simenti kwesịrị ka mma.
Onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ, Zhu Menshou, yana ndị ọrụ na-abịa nzukọ ahụ, ji obi ụtọ nabata Dr. Gao. Zhu gosipụtara na n'okpuru ntiwapụ nke ọrịa ahụ, nnukwu ihe eji mepụta akụrụngwa mepere, ụlọ ọrụ ahụ webatara ohere mmepe otu oge, na oge niile ka edobere ndị kwadebere. Companylọ ọrụ ahụ kwesịrị ịmalite ịchọpụta ihe ngosi azụmaahịa azụmaahịa, ma na-agbanwe ngwaahịa na ụdị ọrụ mgbe niile. Naanị site na ịmụ mgbe niile, itinye ihe ha mụtara, na -emepụta uru asọmpi oge niile, na iwulite otu ndị na-arụ ọrụ nke ọma, ụlọ ọrụ ahụ agaghị enwe ike imeri.
Nzukọ a, Dr Gao mere mmanya mmanya nke poly carboxylic acid na njirimara ya na njirimara ya na nkesa nke usoro njikwa, ọzụzụ teknụzụ, kọwara PCE nke nne mmanya na njirimara nke nkesa ihe na ngwakọta na ntụle, PCE na ihe ndị na-arụ ọrụ ya. on Njirimara nke ihe iwu, ngwakọta na ihe ngwa mgbe ihe ọmụma dị ka nsogbu na countermeasure, na jikọtara na n'ezie engineering ikpe nke yiri technology ebu na nkọwa zuru ezu. N'ikpeazụ, na mpaghara mmekọrịta nke saịtị ahụ, Dr. Gao zara ajụjụ ndị ndị ọrụ Ngalaba Ahịa na ngalaba teknụzụ jụrụ n'otu n'otu, na-enye echiche dị irè maka isi na nsogbu siri ike ndị ọrụ ahịa na teknụzụ zutere. na saịtị oru ngo.
Site na ọzụzụ a, ndị ọrụ kwuru na ha eritela ọtụtụ ihe: ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ire ahịa enwekwuola njiri mara ụdị mmanya mmanya polycarboxylate na ngwa ọrụ ya yana usoro mmụta na arụmọrụ nke teknụzụ njikwa, ma nyekwa ha. usoro iwu nkwado maka ụlọ ọrụ na ngwa nke mgbakwunye technology na mgbe-sales ọrụ.
"Chọọ usoro izugbe, wulite ntọala siri ike ma merie ọdịnihu". Nnukwu ntọala na-eweta atumatu dị mma maka ụlọ ọrụ, mana ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ naanị ndị a na-apụghị imeri emeri ma ọ bụrụ na ọ na-eme nka dị na nke ndị otu ahụ, na-asọpụrụ ngwaahịa ndị a, na-emeziwanye ọrụ ọrụ, ma na-egbo mkpa ndị ahịa. Enweghị njedebe na mmụta na mgba, mana mee ihe ọma, ajụla ọdịnihu, a ga-atụ anya ọdịnihu nke ụlọ ọrụ gao Qiang!
Post oge: Sep-21-2020